Tamin’ny Vato 777, Lasa Vehivavy Voalohany Mpitarika Ao Hong Kong i Carrie Lam Avy Any Beijina · Global Voices teny Malagasy
Tamin'ny Vato 777, Lasa Vehivavy Voalohany Mpitarika Ao Hong Kong i Carrie Lam Avy Any Beijina
Her victory was met with protests by pro-democracy activists.
Voadika ny 05 Avrily 2017 4:55 GMT
Manao ny kabarim-pandreseny ny Lehibe Vaovaon'ny Mpanatanteraka, Carrie Lam, vao voafidy. Sary avy amin'ny Hong Kong Free Press.
Ity lahatsoratra ity dia fitambaran'ireo tantara samy hafa nosoratan'i Elson Tong, Ellie Ng ary Catherine Lai izay navoaka voalohany tao amin'ny Hong Kong Free Press tamin'ny 26 Martsa 2017. Ny dika etsy ambany dia navoaka ato amin'ny Global Voices ho ampahany amin'ny fifanarahana fiarahamiasa.
Tamin'ny 26 Martsa, lasa vehivavy voalohany mpitarika ao Hong Kong i Carrie Lam, Sekretera Jeneralin'ny fitantanana teo aloha, rehefa avy nofidianà mpifidy 777 tamin'ny komitim-pifidianana manana mpikambana 1 194 nanoloana ireo mpifanandrina aminy, Woo Kwok-hing sy John Tsang. Nahazo vato 365 i Tsang, raha vato 21 kosa no azon'i Woo.
Milaza ny tatitra fa i Lam no hany kandidà ankasitrahan'i Beijina ary nangatahan'ny Biraon'ny Fifandraisana ao Shina — solontenan'i Beijina ao amin'ny fari-pitantanana manokan'i Hong Kong – niaraka tamin'ny manampahefana ambony Shinoa sasany, ireo mpikambana ao amin'ny komitim-pifidianana mba hifidy azy.
Lam, 59 taona, dia manampahefana laharana faharoa tao an-tanàna talohan'ny nirotsahany hofidiana ho filohan'ny mpanatanteraka. Niaritra ny havitsian'ny mpanohana izy nandritra ny fampielezankevitra, niaraka tamin'ny mpanakiana izay miantso azy ho dika mitovy amin'ny Filoha Mpanatanteraka Leung Chun-ying ary nampitandrina fa mety haka ny fomba “liana ady” nananan'i Leung izy amin'ny fitantanany.
Tamin'ny 2014, namporisika andiana fanovàna politika notohanan'i Beijina izy, izay raha nanome alalana ny olona hifidy manerana an'i Hong Kong amin'ny fifidianana izay ho Filohan'ny Mpanatanteraka, dia nametra ny zo hanendry ny kandidà ho an'ny komitim-pifidianana misy mpikambana 1 200, nitarika fihetsiketsehana an-dalam-be mandritra ny roa volana nitakiana ny tena fanovàna ny fifidianana.
‘Sitrano ny fizarazarana’
Nampanantena i Lam fa hiezaka hanorina marimaritra iraisana ary “hamerina ny finoana sy ny fanantenana” ao Hong Kong, izay misitraka fizakantena ambony avy any amin'ny tanibe, ary “hanamafy ny fifandraisana misy eo amin'ny Hong Kong sy Shina”.
Nohamafisiny tao amin'ny kabarim-pandreseny:
Hong Kong, ilay tanintsika, dia misedra fizarazarana somary henjana ihany ary nivangongoanà hadisoam-panantenana maro be. Ny laharam-pahamehana ho ahy dia ny hanasitrana ilay fizarazarana ary hanalefaka ny hadisoam-panantenana – sy hampiray ny fiarahamonintsika mba handroso.
Nandritra ny fampielezankeviny, nanantitrantitra momba ny fandarahanasa hanasitranana ilay fizarazarana i John Tsang, ilay kandidà malaza indrindra. Tamin'ny fakàna ilay fandaharanasa, nasian'i Lam tsindrimpeo ny:
Tiako koa ny manamafy: ny hisintona ny fahaizamanao sy ny fahamendrehana no laharam-pahamehana amin'ny famoronana ny ekipako amin'ny fitantanana. Izay rehetra manana fahatsorampo handray andraikitra, ny fahaizana ary ny fahafoizan-tena, na inona na inona firehana politika, dia asaiko hanatevina laharana ny ekipako.
Hoteneniko ny mpikambana rehetra ao amin'ny ekipako mba hihaino sy hiaraka hiasa amin'ny olona amin'ny fandraisana fanapahankevitra iraisana sy fandraisana fepetra. Izay ihany no hany lalana hahatratrarantsika ny tena marimaritra iraisana sy hahazoantsika ny fanohana betsaka avy amin'ny fiarahamonina.
Nampanantena izy fa hiaro ny soatoavina fototry ny tanàna;
Ny soatoavina toy ny fampidirana, ny fahafahan'ny asa fanaovana gazety sy ny fitenenana, ny fanajana ny zon'olombelona, ary ny rafitra izay naharitra ela ny fametrahana azy, toy ny ny fahalevantenan'ny fitsarana, ny fanjakana tàn-dalàna sy ny fitondrana mangarahara, dia zavatra izay hitan'ny olona any Hong Kong ho sarobidy ary ireharehany. Amin'ny maha Filoha Mpanatanterakareo ahy, hanao ny aiko tsy ho zavatra aho mba hiaro ny “firenena iray, rafitra roa” ary hitandro ireo soatoavina fototra eto amintsika.
Raha nanontaniana momba ny tahotra ny hidiran'i Beijina amin'ny raharaha anatin'i Hong Kong, nilaza i Lam fa hanana ny herim-po ilaina mba hiaro ny mponina any Hong Kong, raha mbola zavatra hahasoa an'i Hong Kong.
Nilaza izy fa “nahazo voninahitra be” raha tonga vehivavy voalohany lasa filoha mpanatenteraka ary nohamafisiny fa ilaina ny miralenta mba hisian'ny fampandrosoana marin-toerana.
Hetsi-panoherana tao anatiny sy ivelan'ny foiben'ny fifidianana
Nanamarika ny andron'ny fifidianana teo amin'ny tampon'ny tendrombohitra malaza, Lion Rock, any Hong Kong tamin'ny fanofahofàna saina lehibe mavomavo miaraka amin'ny soratra hoe “Mila ny fifidianana tena marina ho an'ny rehetra aho” ny Ligin'ireo Sosialy Demokraty, vondrona mpandàla ny demaokrasia.
Sary avy amin'ny Ligin'ireo Sosialy Demokraty tao amin'ny Hong Kong Free Press.
Tao anatin'ny foibem-pifidianana tao Wanchai, nifidy nanao vato fotsy ireo mpikambana sasany avy amin'ny komity mpanohana ny fifidianana demokratika, na nandrovitra ny vatony ho toy ny fihetsika maneho fanoherana. Nisy iray tamin'ireo vato fotsy nahitana teny ratsy “T**y” amin'ny teny Shinoa ary navoaka taminà efijery lehibe iray nandritra ny fanisàna ny vato, niteraka tabataba tao anatiny sy ivelan'ilay foibe ary koa tany amin'ny haino aman-jery sosialy.
Pikantsary avy aminà fahitalavitra mifandray amin'ny tariby.
Tao ivelan'ny foibem-pifidianana, tapi-dalan-kaleha ireo mpanao hetsi-panoherana mpomba an'i Beijina sy ny mpomba ny demokrasia.
Nilalao feonkira Shinoa nasionalista malaza iray ireo mpanao fihetsiketsehana mpomba an'i Beijina, nitazona ny sainam-pirenen'i Shina sy ny sainan'ny tanànan'i Hong Kong ary niantso hisian'ny fifidianana ny “filoha mpanatanteraka tena izy”, manondro an'i Carrie Lam.
Ireo mpanohana an'i Carrie Lam mankalaza ny vokatry ny fifidianana. Sary avy amin'ny Hong Kong Free Press.
Etsy an-daniny ireo mpikatroka mpomba ny demokrasia,nihiaka ny fanakianany ny kitranoantrano tamin'ny rafi-pifidianana sy ny fitsabahan'i Beijina tamin'ny fifidianana. Taorian'ny nanambaràna ny voka-pifidianana, nandeha namonjy ny Biraon'ny Fifandraisana amin'i Shina ny sasany amin'ireo mpikatroka, ary nanipy taratasy fifirana tao anatin'ilay trano mijoalajoala — manondro an'i Lam, izay tamin'ny Janoary dia nanaitra ny sain'ny haino aman-jery iraisam-pirenena taorian'ny nanambaràny fa naka fiarakaretska tamin'ny misasakalina avy ao amin'ny tranony vaovao lafo vidy izy mba ho any amin'ny tranony fahiny nomen'ny fitondrana azy, satria tsy fantany hoe aiza no misy ny taratasy fifirana.
Pikantsary avy amin'ny lahatsarin'ny Hong Kong Free Press.
Satria ny “fito” amin'ny teny Kantoney dia mitovy dika amin'ny teny vetaveta hoe “filahiana” sy koa mety hidika hoe “hadalàna” na “hadisoana” raha ampiasaina ho matoateny na mpamaritoetra, ireo vato 777 azon'i Carrie Lam dia niteraka aingam-panahinà kilalaon-teny sy vazivazy.
#HK designer Steve Lee offers his #CarrieLam design to share for free. Blends simplified Lam Cheng characters & #777 https://t.co/i5ULda8b0o pic.twitter.com/crxnAfRzGK
— Yuen Chan (@xinwenxiaojie) March 26, 2017
Steve Lee, mpamorona endrika ao #HK nanome ny sarin'i #CarrieLam nataony mba hozaraina maimaimpoana. Nampifangaroana tsotsotra ireo tarehi-tsoratra Lam Cheng & #777 https://t.co/i5ULda8b0o pic.twitter.com/crxnAfRzGK
Mazava ho azy, ny isa 777 koa dia mety hidika ho loka goavana amin'ny lalao.
Ny manaraka ho an'i Carrie Lam
Hitsidika ny distrika ao an-toerana ilay filoha mpanatanteraka vao voafidy, ary hitsidika ny mpitondra amperin'asa Leung Chun-Yin, ny mpitantsoratry ny fitsarana, ny anteminiera mpanao lalàna ary ireo birao telon'ny governemanta Shinoa any Hong Kong tafiditra anatin'ny fitsidihana diplaomatika. Ahitana ny : Foiben'ny Biraon'ny Fifandraisana, ny biraon'ny Minisitry ny Raharaham-bahiny, ary ny birao foiben'ny Tafiky ny Fanafahana ireo birao telo ireo.
Niditra tao amin'ny fitondrana i Lam tamin'ny 1980. Talohan'ny nanendrena azy ho sekretera jeneraly tamin'ny 2012, nitàna toerana ambony izy, toy ny talen'ny fiahiana ara-tsosialy, sekretera maharitry ny trano fonenana; ny fandaminana sy ny fananantany; Tale Jeneralin'ny Biraon'ny Toe-karena sy ny Varotra tany Londona (Angletera); Sekretera maharitry ny atitany; ary sekreteran'ny fampandrosoana.
Nandritra ny fotoam-pitondrany, voakiana mafy izy noho ny tsy nahavitany niaro ny tombontsoan'ny olona sahirana nandritra ny fotoana naha talen'ny fiahiana ara-tsosialy azy, ary noho ny filazana fa nanao fitantanana tsy nahomby ny raharaham-bahoaka manodidina ny tetikasa Hong Kong Palace Museum.